အထီးကြွက်၏ရှေ့မှောက်၌လိင်စိတ်ပြေငြိမ်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော c-Fos စကားရပ် (Your Brain On Porn) (၂၀၀၇)
Physiol ပြုမူနေ။ 2007 သြဂုတ် 15; 91 (5): 609-19 ။ EPub 2007 ဧပြီ 1 ။
Phillips က-Farfán BV, Fernandez-Guasti တစ်ဦးက.
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သောထိန်းညှိခြင်းအလိုငှါဦးနှောက်ဒေသများစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်, က c-Fos စကားရပ်လိင်အတွေ့အကြုံရှိအထီးကြွက်၏ကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုများအတွင်းကိုလေ့လာခဲ့သည်: ထိန်းချုပ်မှု copulate ခွင့်မပြု, ယောက်ျားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သောရောက်ရန်ခွင့်ပြုနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုလေးခုသုက်နှင့်တိရိစ္ဆာန်များခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာ နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်လေးဆ ejaculated ကြောင်းအထီး suprachiasmatic နျူကလိယဘို့ မှလွဲ. ရှိသမျှကိုအကဲဖြတ်ဦးနှောက်ဒေသများတွင်အလားတူက c-Fos ထုရှိခဲ့ပါတယ်။
အလားတူပင်လိင်ဝအထီးလွတ်လပ်စွာမွတ်မပြေနိုင်သောရောက်ရှိရန်လိုအပ်သုက်၏နံပါတ်အပေါငျးတို့သအကဲဖြတ်ဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်အလားတူက c-Fos ထုရှိခဲ့ပါတယ်။
(နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်လေးဆ ejaculated ကြောင့်ယောက်ျားအတွက်သက်သေ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုဟာ stria terminalis, claustrum, entorhinal cortex, medial preoptic ဧရိယာ၏ anteromedial အိပ်ရာနျူကလိယအတွင်းက c-Fos အဆင့်ဆင့်တိုးတက်နျူကလိယ core ကို, suprachiasmatic နျူကလိယနှင့် supraoptic နျူကလိယ accumbens; သို့သော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေသောဤဒေသများတွင်က c-Fos စကားရပ်ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့ပါဘူး။ လိင်ကဝအမျိုးသားများ copulate မှသို့သော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေမရောက်နိုင်ဘူးခွင့်ပြုခဲ့တိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက, ventrolateral septum နှင့် anterodorsal နှင့် posteroventral medial amygdala အတွက်က c-Fos အထိတိုးမြှင့်လျက်, Piriform cortex အတွက်က c-Fos သိပ်သည်းဆလျော့နည်းသွားခဲ့သည်။